Eoropa Afovoany & Atsinanana · Janoary, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Afovoany & Atsinanana · Janoary, 2014
Tantara mikasika ny Eoropa Afovoany & Atsinanana tamin'ny Janoary, 2014
Rosia 31 Janoary 2014
Estonia 22 Janoary 2014
Rosia 21 Janoary 2014
Rosia 20 Janoary 2014
Nanonona firariantsoa roa samihafa noho ny Taona Vaovao ny filoha : iray ho an'i Rosia any 'Extrême-Orient' , iray hafa ho an'ny ambiny sisa.
Rosia 17 Janoary 2014
Rosia 16 Janoary 2014
Raha nomarihana ho "tsy ofisialy" ny dikanteny, dia somary nihemotra ihany ny mpanara-baovaon'i Rosia raha mahita fa mety miafara eny amin'ny tranonkalan'ny governemanta izany ompa famelezana pelaka izany.
Rosia 11 Janoary 2014
Taonan'ny Pogrom Ao Rosia
Taona nihazakazahan'ny herisetra ara-poko ny taona 2013 ao Rosia. Tsy hafa amin'izany ny tranga farany tamin'iny faran'ny herinandro iny tao an-tanànan'i Arzamas. Fanamarihana: Ny Pogrom, araka ny famaritana ao amin'ny wikipedia teny frantsay, dia avy amin'ny teny rosiana milaza fanafihana, fanaovana herisetra ary famonoana ataon'ny foko iray amin'ny foko hafa.